Digitel သည် လူနေမှုဘဝ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လူမှုဝန်ဆောင်မှုများဆီသို့ ဦးတည်သည့် နည်းပညာများ ဖော်ဆောင်ပေးသည့် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထိရောက်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဖြင့် လူအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပါ။.
လောလောဆယ် Digital ပါ။ နံပါတ်4ဖြင့် 412D နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။. Movilnet နှင့် Movistar တို့နှင့်အတူ တတိယအဆင့်ရှိသော ဤကုမ္ပဏီသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အခြေခံသည့် အခြေခံမူသုံးရပ်အပေါ်အခြေခံသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗျူဟာတစ်ခုရှိသည်။
ဤကုမ္ပဏီသည် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ပုံသေတယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုများအပြင် ငွေပေးချေမှုကြိုတင်နှင့် ငွေပေးချေမှုပုံစံများတွင် နောက်ဆုံးပေါ်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လွှမ်းခြုံမှုနှင့် ၎င်း၏ဖောက်သည်များအားလုံးအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် အာရုံစိုက်မှုဖြင့်။
Digitel အားပြန်သွင်းရန် လိုအပ်ပြီး မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်မသိပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့ မင်းနေရာမှန်ကိုရောက်ပြီ ။ ဤတွင် သင်သည် ဤမိုဘိုင်းလိုင်းကို အားပြန်သွင်းရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနှင့် ၎င်းအတွက် ရရှိနိုင်သော ချန်နယ်များကို ရှင်းပြပါမည်။ အင်တာနက်၊ ATM စက်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ တယ်လီဖုန်းဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ၎င်းကို သင်ကိုယ်တိုင် အားပြန်သွင်းပါ၊ Digitel အက်ပ်နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော SMS.
Digitel တွင် ၎င်း၏ဖောက်သည်များသည် လက်ကျန်ငွေကုန်သွားခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအား လွယ်ကူစွာ အားပြန်သွင်းရန်အတွက် မတူညီသော ချန်နယ်များ ရှိပါသည်။ သင့်အိမ်၏ ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကို သင့်အနေဖြင့် အားပြန်သွင်းခြင်းဖြင့် အချိန်များစွာ သက်သာစေနိုင်သည်။ မိုဘိုင်း သို့မဟုတ် PC. ဒါပေမယ့် လမ်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ သုံးပါ။ ATM စက်များနှင့် အရောင်းဆိုင်များတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။.
အင်တာနက်ပေါ်တွင် မတူညီသော အားပြန်သွင်းသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းများပင် ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့ကို Digitel မှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိထားပြီး ၎င်းတို့အသုံးပြုမှုအတွက် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်မရှိပါ။ ဤသဘောအရ အကြံပြုလိုပါသည်။ သမားရိုးကျ အားပြန်သွင်းသည့် ယန္တရားများကို သီးသန့်အသုံးပြုပါ။.
အင်တာနက်မှ Digitel အားပြန်သွင်းပါ။
မှ Digitel အွန်လိုင်း သင့်လက်ကျန်ငွေကို ငွေဖြည့်ပြီး သင့်ခရက်ဒစ်ကတ်ကို အသုံးပြု၍ ဘီလ်ကို ပေးချေနိုင်သည်။ စာရင်းမသွင်းရသေးရင် ""မှတ်ပုံတင်မယ်” စာရင်းသွင်းပြီးပါက၊ ဧရိယာကုဒ်၊ စကားဝှက်နှင့် စခရင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာသည့် ကုဒ်တို့ဖြင့် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ရန်သာ လိုအပ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် နှိပ်ပါ။အပျငှေ"နှင့်အတွင်း"အကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့်ငွေဖြည့်ပါ"မင်းရဲ့ အားပြန်သွင်းမှုတွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်လိမ့်မယ်။
ထို့နောက်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောဖုန်းနံပါတ်နှင့် သင်အားပြန်သွင်းလိုသောပမာဏကို ရေးထားရမည့် စခရင်ပေါ်တွင် ဝင်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ သင်ပေးချေမည့် အကြွေးဝယ်ကတ်အမျိုးအစား၊ Visa သို့မဟုတ် Mastercard ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ရွေးချယ်မှုများကို ပြသပါမည်။
အွန်လိုင်းကနေတဆင့် အားပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း. Digitel အားပြန်ဖြည့်နိုင်သည့်ဘဏ်များမှာ- Bancamiga၊ Bancaribe၊ Banco Provincial၊ BNC၊ Banco de Venezuela၊ Banco del Tesoro၊ Banco Mercantil၊ Banco Bicentenario၊ Banplus၊ Banco Activo၊ Banco Fondo Común၊ Banco del Sur၊ Banco Venezolano de Crédito။
သင့်တွင် ဤဘဏ်အချို့တွင် အကောင့်တစ်ခုရှိလျှင် သင့်အွန်လိုင်းအကောင့်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး အလွယ်တကူ ငွေပြန်သွင်းပါ။ ဖုန်းနံပါတ်ကို ချိတ်ဆက်ခြင်း။. အားပြန်သွင်းလိုသော နံပါတ်အတွက် စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့် ပမာဏကို ဖြည့်သွင်းပြီး ၎င်းကို သင့်အကောင့်မှ ချက်ချင်း ငွေထုတ်ပြီး သင့်မိုဘိုင်းလိုင်းသို့ ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ATM စက်များမှ ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း။
ခရိုင်၊ Mercantil၊ Banco de Venezuela နှင့် BOD ဘဏ်များ၏ ATM ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ဤရွေးချယ်မှုကို တစ်ရက်လျှင် 24 နာရီရရှိနိုင်ပြီး အားပြန်သွင်းရန်အတွက်သာ၊ သင်သည် တွဲဖက်ဘဏ်များ၏ ဖောက်သည်ဖြစ်ရပါမည်။.
အထက်ဖော်ပြပါ ဘဏ်တစ်ခုခုမှ သင့်ဒက်ဘစ်ကတ်ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး ATM တွင် တစ်ကြိမ်၊ သင့်ကတ်ကို ထည့်သွင်းပြီး Digitel အားပြန်သွင်းမှု ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါ၊ ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ကာ သင်ဖြည့်သွင်းလိုသော ပမာဏကို အမှတ်အသားပြုပါ။ အကြောင်းကြားချက်ကို စောင့်ပါ။ အောင်မြင်သောငွေပေးငွေယူ။
နိုင်ငံတော်ပိုင်နက်တစ်လျှောက်တွင် သင်၏ Digitel လိုင်းကို အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် ဆိုင်များကွန်ရက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့မှာ- Digitel ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများ၊ FARMAHORRO၊ လွယ်ကူသောငွေပေးချေမှု၊ Sigo နှင့် Costa Azul Chain၊ Pagolisto၊ PayAll Kiosks၊ Visual Recarga နှင့် FARMATODO တို့ဖြစ်သည်။
ဤအမှတ်များထဲမှ တစ်ခုခုကိုသွား၍ သင့်နှင့်အတူ ငွေပေးချေခြင်းဖြင့် အားပြန်သွင်းပါ။ ဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်ငွေသားကတ်. စတိုးဆိုင်တာဝန်ခံထံသို့ ဖုန်းနံပါတ်၊ အားပြန်သွင်းရမည့် ပမာဏကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တယ်လီဖုန်းဘဏ်လုပ်ငန်းမှ Digitel အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပါ။
ရိုးရှင်းသောခေါ်ဆိုမှုဖြင့် သင့် Digitel လိုင်းပေါ်တွင် လက်ကျန်ငွေကို သင်ရနိုင်သည် ။ သာ သင်သည် ဘဏ်ဖောက်သည်ဖြစ်ရမည်။ ပြီးလျှင် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ချန်ထားသော နံပါတ်များကို ခေါ်ဆိုပါ- Banco de Venezuela: 0500-MICLAVE (6425283), Bancaribe: 0500-BANCARIBE (2262274), BBVA Provincial (0500) (5087432။ သင်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးသည်နှင့်၊ အော်ပရေတာ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့မှ ကြားခံသူများမပါဘဲ၊ သင်၏ Digitel အားပြန်ဖြည့်ရန် တောင်းဆိုပြီး kiosks၊ Smart Stops နှင့် «သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ရအေးဂျင့်များထံ တိုက်ရိုက်ပေးချေပါ။သင့်ကိုယ်သင် အားပြန်သွင်းပါ။“ အားပြန်သွင်းရန် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ-
Digitel အားပြန်သွင်းရန်အတွက် တည်ထောင်သူ၏မန်နေဂျာကို မေးပါ။
ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် *137*ဖွဲ့စည်းပုံကုဒ်*ငွေပမာဏ# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
အားပြန်သွင်းသည့်ပမာဏကို မန်နေဂျာထံ ပယ်ဖျက်ပါ။
အတည်ပြုချက်မက်ဆေ့ချ်အတွက် သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင် စောင့်ပါ။
Digitel အက်ပ်ဖြင့် အားပြန်သွင်းပါ။
စမတ်ကိရိယာများအတွက် အပလီကေးရှင်းများမှတဆင့် Digitel Android အက်ပ်, Digitel iPhone အက်ပ် , BBVA Provinet မိုဘိုင်း y Mercantile Mobile သင် ဘယ်နေရာမှာမဆို အားပြန်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
သင့်မိုဘိုင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး သင့်နံပါတ်ကို ဧရိယာကုဒ်နှင့် Digitel အွန်လိုင်းတွင် သင်အသုံးပြုသည့် စကားဝှက်ဖြင့် သင့်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းပါ၊ ၎င်းကို သင်မရှိသေးပါက မှတ်ပုံတင်ပါ။ ဒီမှာ. Digitel အက်ပ်ဖြင့် သင်သည် သင့်လိုင်းနှင့် လည်ပတ်မှုများကို အားပြန်သွင်းခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော SMS ငွေဖြည့်မှုများ
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရုံဖြင့် Digitel အား ပြန်လည်အားသွင်းရန် အခွင့်အရေးရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုကို ဖောက်သည်များအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဗင်နီဇွဲလားဘဏ် Digitel Service ဟူသောစကားလုံးဖြင့် Clave Móvil နှင့်ဆက်စပ်နေသော သင့်နံပါတ်မှ 2661 သို့မဟုတ် 2662 သို့ SMS တစ်စောင်ပေးပို့ခြင်းဖြင့်၊ အားပြန်သွင်းရမည့်နံပါတ်နှင့် ဒဿမများပါသည့်ပမာဏ။
ဖောက်သည်များအတွက်လည်း Bancaribe 22741 သို့ R စာလုံးကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့်၊ အားပြန်သွင်းရန် ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့်၊ ငွေထုတ်ရမည့် အကောင့်၏ အတိုကောက်မှာ CC သို့မဟုတ် CA ဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သော အားပြန်သွင်းမှုရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ မက်ဆေ့ချ်ကို သင်လက်ခံရရှိပါမည်။ အားပြန်သွင်းရန် ရွေးချယ်မှု၏ အက္ခရာနှင့်အတူ အခြားမက်ဆေ့ချ်ကို ပေးပို့ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် သင်သည် အတည်ပြုချက်မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ကုမ္ပဏီများ » Digitel မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ။
« Digitel မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ » တွင် မှတ်ချက် 1 ခု
23:2020 pm မှာဇူလိုင်လ 4, 16
BOD က တခြားဘဏ်တွေကနေ ငွေပြန်မသွင်းနိုင်လို့။